LG Washing Machine TT16WAPG ~ ICT.com.mm
HomeLG Washing Machine TT16WAPG
Roller Jet dishwasher3types of washing programs Wind Jet Dry helps clothes dry faster. Anti-rat coating Warranty: 1 Year LG အမှတ်တံဆိပ် လျှော်ကန် + အခြောက်ခံကန် နှစ်မျိုးပါ အဝတ်လျှော်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ Roller Jet dishwasher... [Learn more]
Brand: LGFilter by: TMW, Washing Machines
Roller Jet dishwasher
3 types of washing programs
Wind Jet Dry helps clothes dry faster.
LG အမှတ်တံဆိပ် လျှော်ကန် + အခြောက်ခံကန် နှစ်မျိုးပါ အဝတ်လျှော်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ Roller Jet dishwasher စနစ်က ကန်အတွင်းမှာ အဝတ်အထည်တွေကို လှည့်ပတ်လျှော်ဖွပ်စေမှာဖြစ်ပြီး အစွန်းအထင်းတွေကို ကောင်းစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အဝတ်အထည်တွေကို သန့်ရှင်းစေရုံသာမက ချည်မျှင်တွေကိုလည်း နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေမှာပါ။ Gentle, Normal, Strong ဆိုပြီး အဝတ်လျှော်ပရိုဂရမ် သုံးမျိုးပါဝင်တာကြောင့် မိမိလျှော်ဖွပ်လိုတဲ့ အဝတ်အထည်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ ပရိုဂရမ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Wind Jet Dry ဟာ LG ရဲ့နည်းပညာသစ်ဖြစ်ပြီး လှည့်လည်ပြီးရေညှစ်ချပေးချိန်မှာ Moisture တွေကို ပိုမိုလျော့နည်းစေတာကြောင့် အဝတ်အထည်တွေကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့စေမှာဖြစ်ပြီး အခြောက်ခံကန်မှာ မှိုစွဲခြင်းမရှိအောင်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပကိုယ်ထည်ကို3mm အထူရှိတဲ့ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်အမာစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အဝတ်လျှော်စက်က ပိုမိုခိုင်မာပြီး ကြာရှည်အသုံးခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Dishwasher Roller Jet system
The powerful Roller Jet dishwasher is washing, because the dishwasher will rub the fabric along with the rotation, helping to remove stains very well. Makes washing clothes clean and gentle on the fabric.
Choose from3washable programs (Gentle, Normal, Strong)
Choose from3wash programs so you can choose the right program for your type of clothing.
Wind Jet Dry is LG's technology that helps to reduce moisture from clothes during the spin-drying process. Causes the clothes to dry faster and also helps the dry cleaning tank to prevent mold.
The LG double-barrel washing machine hasaprotective coating on the body. Helps increase the durability of the use of the machine.